गायिका ज्योती मगर यस्तो फरक लुक्समा, मोहित पार्ने रूप, फिदा बनाउने सुन्दरता…..(तस्बिर सहित) – Online Nepal
गायिका ज्योती मगर यस्तो फरक लुक्समा, मोहित पार्ने रूप, फिदा बनाउने सुन्दरता…..(तस्बिर सहित)
November 19, 2020 142
ज्योती मगर । नामै काफी छ । नेपाली कला क्षेत्रको चर्चित यो नाम विभिन्न तवरवाट बेला बेलामा चर्चामा आईरहन्छ । कहिले प्रस्तुतीको कारण त कहिले केहि गित संगितले ज्योतीलाई सधैँ वि,वा,दमा राखिरह्यो । सबैलाई थाहै छ, यो मनोरञ्जनको संसार हो ।
आफ्ना सबै काम छोडेर आउने दर्शकलाई अलिकति पनि मनोरञ्जन दिन सकिएन भने त त्यसको अर्थ पनि भएन नि ।
अरूले मज्जाले कपडा लगाएर प्रस्तुति दिँदा अहिलेसम्म सूर्य पश्चिमबाट उदाएको छैन, तपाईंलाई चाँही किन त्यो टाइपको कलाकार हुन मन लागेन ? सबैले एउटै हिसाबले काम गरेर पनि भएन नि । अर्को कुरा ज्योति मगर पूरा मनोरन्जन दिने टाइपकी कलाकार हो ।
मैले देखाउनै नहुने कुरा त देखाएकी छैन नि? मलाई त रमाइलो लाग्छ । मैले गरेको कुरामा दर्शक हाँस्दा र मनोरन्जन लिँदा एकदमै खुसी लाग्छ । ज्योति मगर स्याड गीत गाएर धुरु–धुरु रुवाउने गायिका होइन । साहित्य र संगीतमा कहिलेकाहीं दुईअर्थी शब्द पनि रमाइलो हुन्छ ।
नारायणगोपालले नआऊ राति दारु पिएको बेला, मेरो हात सल्बलाउँछ भन्ने टाइपको गीत त उहिले गाएका थिए । अरूको वि,रोध नहुने, मेरो मात्र विरो,ध गरेर भएन नि । भित्र–भित्र विरोध गरेजस्तो गर्ने, अनि ज्योति नभै पनि नहुने ? कम्मर मुनि २ इन्च र छा,तीमा एक टुक्रा कपडाको प्रस्तुति कहिलेसम्म चल्छ ? अफकोर्स, ५० वर्ष पुगेपछि अलिकति नारी टाइपको भएर हिँड्नुपर्ला ।
साडी लगाउने, चुरा पोते लगाएर घरको काम गर्ने, मन्दिर जाने, भजन गाउने टाइपको पनि हुनेछ, तर अहिले त म जवान छु, अलिकति राम्री पनि छु । ज्यान आकर्षक छ । विगतमा मोटो भए कति खाइलाग्दो भनिन्थ्यो । पछि बिस्तारै दुब्लो ज्यान भएकातिर आकर्षित भए युवाहरू ।
पछि हाड मात्र बाँकी रहेकी केटीमा पनि आकर्षित भए, तर अहिले बिस्तारै फेरि मोटीहरूको समय आएको छ । म त आफ्नो फिगरमा एकदमै प्राउड गर्छु । अहिले वान पिस नलगाएर, देशविदेशका कार्यक्रममा स्टेज नतताएर बूढी भएपछि रहर गरेर त भएन नि ।
ज्योति मगरले नेपाली लोक संगीत बिगार्नु बिगारी भनेर आरोप लाग्दै आएको छ, कहिलेकाहीं यो क्षेत्र नै छाड्दिऊँ भन्ने लाग्दैन ? यो ज्योति तातै खाऔं जली मरौं भन्ने स्वभावकी छैन । १३ वर्ष भयो, मैले यो क्षेत्रमा काम गर्न थालेको, मलाई त्यस्ता कुराको कुनै अर्थ लाग्दैन ।
स्टेज कार्यक्रममा साना बच्चाबच्चीदेखि ठूला बूढापाकासम्मका उपस्थित हुन्छन् । कम्तीमा आफू सजग भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ? एउटा कुरा, कुनै पनि कार्यक्रममा जहाँँ ज्योति मगर उपस्थित हुँदैछे भन्ने खबर छ भने त्यो पूरै मनोरन्जन लिन आएको दर्शक हो ।
अनि अर्को कुरा मेरा दर्शक टि न,एजर् मात्र होइन, दारी–कपाल पूरै फुलेकाहरू पनि छन् । उनीहरू सबै मेरो प्रस्तुतिमा उफ्रिएको स्टेजबाट देखिरहेकै छु । स्वर पनि ठीकै हो । अभिनय पनि ठीकै–ठीकै हो, तर तपाईं त निकै व्यस्त हुनुहुन्छ । अचम्म लाग्दैन किन यति व्यस्त भएँ भनेर ? मेरो प्रश्न पनि यही हो । म एकदमै ट्यालेन्टचाँही होइन ।
सबै कुरा ठीक–ठीकै टाइपको गर्छु, तर किन यति धेरै चर्चा अनि चियोचर्चो ? सबैले बलेको आ,गो ताप्छन् भनिन्छ, सायद अहिले मेरो आ,गो बलिरहेको छ र अरूले त्यो तापिरहेका छन् कि ? म आफैं कन्फ्युज छु। ज्योति मगरले साडी, ब्ला,उज लगाएर स्टेजमा उत्रने दिन कहिले आउला ? त्यो पनि आउँछ, चिन्ता नलिनुस् ।
अहिले मैले गीत गाउँदै, नाच्दै मनोरञ्जन प्रदान गर्नुपर्छ । पूरै साडी–ब्लाउजमा प्रस्तुति दिँदा लड्ने र अल्झने डर हुन्छ । कहिलेकाहीं ज्योतिले अति गरी भनेर स्टेज कार्यक्रमबाट दर्शक फर्किए भन्ने समाचार आउँछ, कहिले गीतको छायांकनका क्रममा स्थानीयले लखेटे भन्ने खबर आउँछ ।
ज्योतिको ध्यान यतापट्टि जाँदैन ? स्थानीयले लखेटे भन्ने खबरचाँही गलत हो । त्यो केही मानिसले रचेको षड्यन्त्र हो । कसले त्यो काम गरेको हो भन्ने पनि मैले बुझेकी छु तर मैले त्यो विषयलाई लिएर कसैसँग झगडा गरिन ।
मलाई कामले नै फुर्सद छैन । अनावश्यक हल्ला गर्नेहरूको पछि लागेर के गर्नु ? छातीमा हात राखेर भन्नुस् त ? ज्योति मगर चल्नुको कारण प्रस्तुति नै हो नि ? के के भनेर त मिडियाहरूले बनाउने मसला हो । म त्यति उ,प,द्रो पनि छैन ।
अलिकति फरकचाँही गर्नुपर्‍यो । मलाई कुनै पनि कार्यक्रममा दर्शक नचाउन तथा उनीहरूलाई पूर्ण मनोरञ्जन प्रदान गर्न बोलाइन्छ । त्यसका लागि अलिअलि त हुनैपर्‍यो । विवाहचाँही नगर्ने ? भनेजस्तो श्रीमान् पाइनु पर्‍यो नि । पाएँ भने विवाह गर्ने हो नत्र कोमल वली–२ पनि हुन सकिन्छ । ब्वाइफ्रेन्ड त होलान् नि ? मलाई खासै झूट बोल्न आउँदैन । बुझ्नु न मिलाएर, तर एउटा समयमा एउटा मात्र ब्वाइफ्रेन्ड हुन्छ ।
अहिलेसम्म कति ब्वाइफ्रेन्ड भए भन्ने कुरा गनेर पनि कहाँ बसेकी छु र ? कान्तिपुर साप्ताहिकका लागी रामजी ज्ञवालीले लिएको अन्तर्वातामा आधारित कुरा कानि हेरौ ज्योति का केहि तस्बिरहरु।
Prevचिनीले यसरी ठिक गर्नुहोस् फुटेको कुर्कचा, जान्नुहोस् अन्य घरेलु ३ तरिका
Nextयी चर्चित अभिनेत्रीको यस्तो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा रातारात भाइरल [ भिडियोसहित ]
यी ३ राशिले लगाउनु हुँदैन् सुनका गरगहना
कोरोना जित्ने सन्देश भन्दै स्विजरल्याण्डले चम्कायो नेपालको झण्डा र हिमाल
प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गरिएका बिरामी कोरोना मुक्त
बजाजले पहिलो पटक २५० सेग्मेन्ट नेपालीमा भित्र्याउँदै, कति पर्छ मूल्य ?
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (60559)
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (50302)
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (44831)
काठमाडौंमा डेरा गरेर बस्नेहरुको लागी आयो यस्तो खबर ! (44462)
जेठ ३ गते शनिबारदेखि यस्ता कडा नियमहरु लागु हुने, लकडाउनमा यस्तो कसैले नसोचेको नियम आयो हेर्नुहोस (43108)
वैशाख ३ गतेपछि यस्तो छ आवतजावतको तयारी , ३ गते सम्म धैर्य गरौ (41098)
तल्लो पेट दुखेर अस्पताल पुगेकाको जाँच गर्दा डाक्टर नै च*कित हुने देखियो विश्वकै दुर्लभ घ*टना (37634)
नवराज-शुष्मा प्रकरण : नवराजकी प्रेमीका शुष्माले पहिलोपटक मुख खोलीन् (35935)
लकडाउनकै बीच भर्खरै यस्तो घोषणा, जनताको जीवनका लागि यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई (भिडियो सहित्) (28883)
यसरी बस्यो १६ बर्षे बालिकाको पेटमा बच्चा , अन्तत: आफैले भनिन् कस्ले गर्यो यस्तो (भिडियो सहित) (27420)
लालबाबु राउतको फेसवुक प्रोफाइलमा को हुन् यि सुन्दर युवती ?
२ बर्षकी छोरीको ला श प्लास्टिकमा लपेटेर मोटरसाइकल लग्दै गरेको कारण खुल्दा दुनियाँकै ह्दय रसायो
ग र्भमा शि शु बोकेर न्या यका खोज्दै १४ वर्षीय किशोरी
यी ५ गलत बानीले सँधै गराउँछ धनको कमी महसुस, हुन्छिन् लक्ष्मी बेखुशी